onlineakhabar.com: हेर्नुहोस् !! पोखरामा भयो यस्तो अनौठो शैलीको विवाह....
Amazing News, Amazing World, Main News, National, Nepali News, Pokhara News » हेर्नुहोस् !! पोखरामा भयो यस्तो अनौठो शैलीको विवाह....
हेर्नुहोस् !! पोखरामा भयो यस्तो अनौठो शैलीको विवाह....
अहिले चारैतिर विवाहको मौसम छ, विवाह भनेपछि धेरै तडकभडक र बढी फजुल खर्च गर्ने गरिन्छ । तर साइकल सिटी पोखराका सचिव अभिषेक कोइरालाले अलि फरक तरिकाले विवाह गरे ।
अगाडि अगाडि साइकलको लर्को पछाडि पछाडि फूलै फूलले सजिएको रिक्सा । घरमा गाडीको कमी थिएन । उनी पोखरा फुटसल एरिनाका मालिक पनि थिए ।
आफू वातावरण प्रति सचेत भएकोले आफनो विवाहमा वातावरण मैत्री रिक्साको प्रयोग गर्ने र अरु जन्तीलाई साइकलमा सहभागी गराउने सोच सहित आफूलाई तीन पांग्रावाला रिक्सामा बसेर जन्ती जाने सोच थियो । तर त्यो असम्भव भए पछि ब्याट्रीवाला रिक्साको प्रयोग गरेको बताए ।
बेहुला बेहुली लिन रिक्सामा हेम्जा पुग्दा अचम्मै मानेर हेर्नेको भीडै थियो । कसैले साइकल र्‍याली हो कि के हो भनी प्रश्न गर्थे भने कोही रिक्सामा बेहुला देखेर रमाइलो मान्दै थिए ।
बेहुली कुसुम अधिकारी आफूलाई रिक्सामा लिन आउँदा केही अप्ठयारो महसुस नभएको बरु रिक्सामा चढ्दा अति फरक अनुभव भएको बताइन् । तर यस किसिमको विवाह भने नेपालमा नौलो होइन । अहिले युवाहरु वातावरणप्रति सचेत छन् भन्ने प्रमाण हो ।
केही महिना पहिले काठमाडौंमा वातावरण अभियान्ता तथा साइकल यात्री शैलेन्द्र डंगोलले पनि आफ्नी दुलही लिन जाँदा ३ प्रांग्रावाला रिक्साको प्रयोग गरी सबै जन्तीलाई साइकलमा सहभागी गराएका थिए ।
स्रोत : समाधानन्यूज
Tags : Amazing News Amazing World Main News National Nepali News Pokhara News